Oil muxaadaro System la Best High-Quanlity Products - Shiinaha NIutech Deegaanka
Oil muxaadaro System la Best High-Quanlity Products
nidaamka muxaadaro Oil
1. barashada habka Technical
Ka dib markii si ku filan beddelashada kulaylka leh wax soo saarka ka soo line lateral munaaraddii muxaadaro, saliidda cayriin galo foornada oo waxaa kor loogu kululeeyo si heer kulka ah ee loo baahan yahay. Saliidda cayriin ka dib markii kulul foorno waxaa loo wareejiyey galay munaaraddii muxaadaro for muxaadaro ah, qaboojinta After a, gaaska aan guban la helay karaa sare ee munaarad, jajab shidaalka at 1 st line Hawada, iyo jajab naaftada light at 2 nd Hawada line, jajab naaftada culus at 3 rd line iyo saliid culus hoose ee munaaraddii. Content The wax saliid caag xumu waa xad sare; saliidda cayriin caag galaa go'an nuclear-sariirta horseed de-badidood geedi socodka dib markii kulaylka kala beddelashada waxay dhex foornada, ka dibna waxaa loo wareejiyey galay munaaraddii muxaadaro ee muxaadaro, iyo mid kasta oo wax soo saarka line lateral la helay doonaa. Gaaska Non-guban waxaa la soo bandhigay foornada, waayo, sida nooc ka mid ah shidaalka gubanaya. Baatrool iyo naaftada jajab waxaa si joogto ah wareejiyo nidaamka qasayso saliid lagu sifeeyo dhaqo alkali iyo qasayso si aad u hesho shidaalka ee firfircoon iyo naaftada oo kula kulmi kartaa shuruudaha suuqa. Saliidda culus hoose ku jiray munaaraddii waxaa loo wareejiyey galay taangiga saliidda shidaalka culus si ay ugu deeqdo Shidaalka foornada iyo kuleeliyaha uumi, saliidda nastay culus lagu milmay doonaa si waafaqsan shuruudaha suuqa ka dibna iibin sidii shidaalka.
2. Qalabka Dastuurka iyo Main Qalabka
unit muxaadaro saliid waxaa gebi ahaanba u qaybsan 8 nidaamyada sida soo socda: habka kuleeliyaha Steam nidaamka saliidda cayriin nidaamka line saliid lateral Non-guban Oil nidaamka habka nidaamka gaaska biyo qaboojinta riixo qasayso hab nidaamka Control kasta
3. Features iyo faa'iidooyinka
1. Waxa ay ogaadaan kartaa Joogta ah geedi socodka, qasayso iyo warshadii oo saliid cayriin, loo kordhiyo awoodda nidaamka of go'an dhamaystiran oo qalabka, yareeyo waqtiga soo saarka iyo tayadoodii tayada wax soo saarka, in waqtigaas, hufnaan wax soo saarka iyo dakhliga ganacsi si weyn loo horumarin doonaa. 2. gaaska Non-guban waxaa la soo bandhigay foornada, waayo, sida shidaalka ah, taas oo keliya ma aha waxa ay yaraynaysaa wasakhaynta hawada oo gubanaya iyo sidoo kale badbaadiyay tamarta iyo sidoo kale hoos u qiimaha. 3. Saddex faa'iidooyinka ugu weyn ee nuclear-sariirta go'an: (1). Wax ku ool ah ee lagu xallinayo dhibaatada in content nijaasta daahiriya ee saliidda cayriin waa sidaas sare in deactivates Hannaan si deg deg ah. (2). Waxa ay ogaadaan kartaa dib u warshadaynta Hannaan iyo in la yareeyo kharashka hawlgalka si weyn. (3). horseed saamayn de-badidood ma hagaajin karaa oo keliya heerka dhalidda ee shidaalka naaftada iyo iftiinka ku daray qiimaha sare, sidoo kale hagaajiyo tayada saliid ku ool ah. 4. set The dhamaystiran oo nidaamka muxaadaro waxaa si toos ah ay gacanta ku PLC nidaamka (control macquulka Programmable), gaadhaysaa in si toos ah loo xakameeyo dhibcood tixraaca oo uu leeyahay hawlaha kala duwan, sida, xog ururinta, xisaabinta, diiwaanka, foomamka warbixinta print, qaylo iyo wixii la mid ah.
Industrial joogto ah, dhex weyn, xoojinta tayada daaweynta iyo awoodda wax soo saarka. Exclusive technology pyrolysis heerkulka yar yahay, isticmaalka yar yahay, kor u dhalid saliid iyo tayada, loo hubiyo in muddo dheer, hawlgal joogto ah oo joogto ah iyo wax soo saarka, si weyn ballaariyo qalabka * dari. Exclusive anti-cocking, technology qaybinta kaamerada, awood wax ku siman kulul iyo? Gebi pyrolized, in gaari alaabta oo tayo sare leh. Gaar technology seal kulul, si loo hubiyo in howlgal ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. isdaahirinta, gaaska Exclusive iyo dhamaystirka kulaylka technology isticmaalka qashinka dib, gaaska ku daahir yeelay waxaa loo isticmaali karaa nidaamka kulaylinta sida gaaska guban, kulaylka haray lagu dully isticmaali karo, xaqiiqsadeen in is-siin waayo reaction pyrolysis aan il dheeraad ah kulaylinta, si weyn loo yareeyo kharashka soo ordaya. gaaska Qiiqa of line-soo-saarka ayaa la tijaabiyey, oo dhan Halbeegga hawada looga baahan yahay ee EU EEA ee Midowga Yurub iyo US EPA. line-soo-saarka oo dhan ay qaataan PLC gacanta caaqil, digniin, qaylo iyo shaqada auto-saxo, caymiyaan hawlgalka hoos xaaladda ammaanka. looga baahan yahay Low waayo, shaqaale, xoojinta shaqada iyo wax soo saarka Low nadiif ah.
Previous: qashinka dhirta pyrolysis caag Best High-Quanlity Products
Next: Duugga Sii qalabka warshadaha Turos Pyrolysis
A: Industrial Duugga Sii Turos Pyrolysis Production Line, Industrial Sii qashinka caaga Pyrolysis Line, Nidaamka muxaadaro Oil, Carbon Black dheeraad ah System Daaweynta
A: faahfaahinta The saliidda soo saaray line-soo-saarka our pyrolysis joogto ah waxaa waafaqsan SH / T0356-1996 No 4 Light Shiidaalka Oil. saliidda soo saaray uu qiimo kulayl sare iyo content baaruud yar yahay, in la isticmaali karo in lagu gubashadeeda, matoor iyo saliidda cayriin, waayo, muxaadaro iwm saliidda ka dib markii habka muxaadaro lagu saleyn karo xawaaraha engine weyn awood yar naaftada, injineernimada iyo gaadiidka beeraha / badda injineer iyo cayn kasta oo matoorrada. Waayo, codsiga ah Carbon Black, fadlan nala soo xidhiidh si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah
qalabka nadiifiskeeda u Oil
Sii Qalabka Oil Dhoobada Pyrolysis
Turos Duugga Sii Pyrolysis Production Line
warshadaha Duugga Sii Turos Pyrolysis Machine
Industrial Sii qashinka caaga Pyrolysis Machine
Oil turxaan Plant
Oil Dhoobada Recycling Machine
Oil Dhoobada soo jeedin Daaweynta Qalabka
caaga Recycling Machine
Pyrolysis caaga Si Oil
duugga ah Turos Pyrolysis Plant
Turos Recycling Line
Turos Si shidaalka Plant
Turos Si Oil
Qashinka caaga Pyrolysis Production Line
qashinka caaga Recycling Machine
Qashinka caaga soo jeedin Daaweynta Qalabka
Qashinka caaga Si shidaalka Qalabka
caaga qashinka Si shidaalka Plant
Qashinka caaga Si Oil Qalabka
Qashinka caaga Si Oil Plant
Qashinka Rubber Pyrolysis Qalabka
Qashinka Turos Recycling Qalabka
technology Latest Sii Qashinka Turos Pyrolys ...